50,000 tan oo ah soosaarka bacriminta xarunta - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Bacriminta isku-dhafan, oo sidoo kale loo yaqaan bacriminta kiimikada, waa bacrimin ka kooban laba ama saddex nafaqadood oo nafaqooyinka dalagga ah, sida nitrogen, fosfooraska iyo potassium, oo lagu soo saaro fal-celin kiimikaad ama qaabab isku dhafan; Bacriminta isku dhafan waxay noqon karaan budo ama granular. Bacriminta isku-dhafan waxay ka kooban tahay maaddooyin firfircoon oo sarreeya, way fududahay in lagu milmo biyaha, si dhakhso leh ayey u jajabtaa, waana sahlan tahay in xididdada lagu nuugo. Sidaa darteed, waxaa loo yaqaan "bacriminta dhaqso wax u qabata". Shaqadeedu waa inay buuxiso baahida iyo isku dheelitirka nafaqooyinka kala duwan ee xaaladaha wax soo saarka kala duwan.
Khadadka waxsoosaarka sanadlaha ah oo gaaraya 50 kun oo tan oo bacriminta isku dhafan ah ayaa isugu jira qalab casri ah. Kharashaadka waxsoosaarku ma shaqeeyaan. Khadadka wax soo saarka bacriminta ee isku jira waxaa loo isticmaali karaa isku dhafka alaabta ceeriin ee kala duwan. Ugu dambeyntiina, Bacriminta isku dhafan oo leh uruurinno iyo qaacido kala duwan ayaa loo diyaarin karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah, iyadoo si wax ku ool ah loo buuxiyo nafaqooyinka ay u baahan yihiin dalagyada, isla markaana xalliyaan khilaafaadka ka dhexeeya dalabka dalagga iyo bixinta ciidda.
Khadka Waxsoosaarka Bacriminta Isku-darka waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro Bacriminta isku-dhafan ee qaaciddooyinka kala duwan sida potassium s nitrogen, phosphorus potassium perphosphate, potassium chloride, granular sulfate, sulfuric acid, ammonium nitrate iyo qaaciidooyin kale oo kala duwan.
Maaddaama aan nahay soo saare xirfadle ah oo ah qalabka khadka wax soo saarka bacriminta, waxaan siinnaa macaamiisha qalabka wax soo saarka iyo xalka ugu habboon ee baahiyaha wax soo saar ee kala duwan sida 10,000 tan sanadkii illaa 200,000 tan sanadkii. Qalabka dhameystiran waa mid is haysta, macquul ah oo cilmiyaysan, oo leh hawlgal xasilloon, saamayn tamar-badbaadin wanaagsan, kharashka dayactirka oo hooseeya iyo hawlgal habboon. Waa xulashada ugu habboon ee soo-saareyaasha bacriminta isku-dhafan (bacriminta isku-dhafan).
Khadka wax soo saarka bacriminta ee isku dhafan wuxuu soo saari karaa bacriminta isku dhafka sare, dhexdhexaad iyo hoose ee dalagyada kala duwan. Guud ahaan, bacriminta isku dhafan waxay ka kooban tahay ugu yaraan laba ama seddex nafaqo (nitrogen, fosfooraska, potassium). Waxay leedahay astaamaha ku jira nafaqada sare iyo waxyeellooyin yar. Bacriminta isku dhafan ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa bacriminta isu dheelitiran. Kaliya ma hagaajin karto waxtarka bacrinta, laakiin sidoo kale waxay dhiirrigelinaysaa waxsoosaarka deggan ee sarreeya ee dalagyada.
Codsiga khadka wax soo saarka bacriminta isku dhafan:
1. Habka wax soo saarka ee HOL-baaruud la miiray.
2. Nidaamyada wax soo saar ee kaladuwan ee Bacriminta isku-dhafka dabiici iyo kuwa aan dabiici ahayn.
3. Nidaamka bacriminta Acid.
4. Nidaamka bacriminta ee warshadaha budada ah.
5. Nidaamka wax soo saarka urea-ga oo siweyn u-firidhsan.
6. Habka wax soo saarka ee bacriminta shaxda geedo.
Qalabka ceyriinka ah ee loo heli karo wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah:
Qalabka ceeriin ee khadka soo saarista bacriminta xarunta waa urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonia dareere, ammonium phosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, oo ay ku jiraan dhoobada qaar iyo buuxiyo kale.
Khadadka waxsoosaarka bacriminta isku-dhafka ee durbaanka wareega ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu soo saaro bacriminta isku-dhafka sare. Wareejinta qalabka wareega waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro tikniyoolajiyad isku-dhafan oo heer sare ah oo hooseeya, oo ay weheliso tikniyoolajiyada isku-dhafan ee anti-cufan, tikniyoolajiyadda wax soo saarka bacriminta isku-dhafan ee nitrogen, iwm.
Khadadka soo saarista bacriminta isku dhafan ee warshaddeena waxay leedahay astaamaha soo socda:
Qalabka ceyriinka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa: Bacriminta isku dhafan waxaa lagu soo saari karaa iyada oo loo raacayo qaacido kala duwan iyo u dhiganta bacriminta isku dhafan, waxayna sidoo kale ku habboon tahay soo saarista Bacriminta isku dhafan ee dabiici ah iyo kuwa aan dabiici ahayn.
Heerka ugu yar ee wareega iyo dhalidda biobacterium-ka ayaa sarreeya: hannaanka cusubi wuxuu ku guuleysan karaa xaddiga goos gooska ah ee in ka badan 90% ilaa 95%, iyo tikniyoolajiyadda qalajinta dabaysha ee heerkulka hoose waxay ka dhigi kartaa bakteeriyada microbial-ka inay gaarto heerka badbaadada in ka badan 90%. Shayga la dhammeeyay ayaa qurux u leh muuqaal ahaan iyo xitaa cabir ahaan, 90% ka mid ah waa jajabyo cabbirkoodu yahay 2 ilaa 4mm.
Nidaamka shaqadu waa mid jilicsan: habka khadka soo saarista bacriminta isku dhafan ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo alaabada ceyriinka ah, caanobooraha iyo goobta, ama habka loo qaabeeyey ayaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee macaamiisha.
Qiyaasta nafaqooyinka ee alaabta la dhammeeyay waa mid deggan: iyada oo loo marayo cabbirka tooska ah ee maaddooyinka, cabbirka saxda ah ee adag ee kala duwan, dareerayaasha iyo alaabada kale ee ceyriinka ah, ku dhowaad ilaalinta xasiloonida iyo waxtarka nafaqo kasta inta lagu jiro howsha.
Nidaamka socodka ee khadka soo saarista bacriminta ee isku dhafan ayaa badanaa loo qaybin karaa: maaddooyinka ceyriinka, isku darka, jajabinta qanjirayaasha, kala-soocidda, baaritaanka hore, qallajinta walxaha, qaboojinta walxaha, baaritaanka labaad, daaha walxaha dhammaaday, iyo baakadaha tirada leh ee alaabada la dhammeeyay.
2. Isku qas:
Burucda ku jirta maaddada ayaa la jajabiyaa ka dib marka si siman loo isku daro, taas oo ku habboon falanqaynta kala-soocidda soo socota, inta badan iyada oo la adeegsanayo jajab.
Maaddada ka dib marka si isku mid ah loo jajabiyo loona jajabiyo ayaa loo qaadaa mashiinka kala-soocidda iyada oo loo sii marinayo suunka xambaarka, taas oo ah qaybta ugu muhiimsan ee khadka wax soo saarka bacriminta. Xulashada granulator waa mid aad muhiim u ah. Warshadeenu waxay soo saartaa granulator disk, granulator durbaan, extruder rullaluistemadka ama granulator bacriminta isku dhafan.
Qaybaha waa la sifeeyey, jajabyada aan u qalmin ayaa lagu soo celiyey isku-darka sare iyo isku-xirka isku-xirka dib-u-soo-celinta. Guud ahaan, mashiinka shaandhada wax lagu xiro ayaa la isticmaalaa.